Pr RAYMOND RANJEVA : TSY MAHA EFA NY ANDRAIKINY IREO MPITONDRA ANKEHITRINY – MyDago.com aime Madagascar
Pr RAYMOND RANJEVA : TSY MAHA EFA NY ANDRAIKINY IREO MPITONDRA ANKEHITRINY
Naseho tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny hotely La rotonde Besarety androany ny vokatry ny fanangonan-tsonia avy amin’ireo olom-pirenena izay mitaky ny Pr Raymond Ranjeva hitarika ny tetezamita vaovao tsy miandany. Olom-pirenena miisa 40000 no nanohina ny antso ary nanao sonia tao anatin’ny roa volana nivohany, izay nanehoan’ireo nandray anjara tamin’ny fanaovan-tsonia ny fiaraha mientany sy fahavononany handray andraikitra ho fanavaozana ny fototra iorenan’ny fitondrana mba hiverenan’i Madagasikara amin’ny ara-dalàna sy ametrahana fitondrana tan-dalàna eto aminstika. Resy lahatra ireo nanao sonia fa mila olona manana traikefa sady efa nahomby teo amin’ny fanelanelanana nikatsaham-bahaolana teo amin’ny sehatra irsaim-pirenena ary mahafehy tsara ny paika ivoahana amin’ny krizy. Raha atao tomba-maso hoy izy, dia toa tsapa fa ohatry ny mizotra araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena taorian’ny nanaovan-tsonia ny tondrozotra. Saingy rehefa tomorina akaiky ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny toy ny firongatry ny tsy fandriampahalemana izay mampitaintain-dava ny mponina na ambanivohitra na an-tanan-dehibe, ny fitotongan’ny fiainan’ny mponina mihalatsaka anaty fahantrana, izay lasa aretina tandra vadin-koditra mikiky ny firenena manontolo andro aman’alina, dia ahatsapana fa tsy maha efa ny andraikiny ireo mpitondra ankehitriny hatrany amin’ny filohany, mandalo amin’ireo mpanao lalàna tsy voafidim-bahoaka napetrak’io tondrozotra io. Paik’ady vaovao miorina amin’ny fametrahana tetezamita tsy miandany ahazoana mitsabo ireo aretina mamono ny firenena no hahazoa-mitsabo miandalana ny firenena mba ahazoana manomanana fifidianana demokratika marina ivoahana amin’ny krizy no takian’ny zavamisy ankehitriny.
TSY MAHAFEHY FITONDRAM-PANJAKANA NY MPITONDRA ANKEHITRINY
Raymond Ranjeva, manolo-tena hamaha olana !
Manahy ny tsy fahombiazan’ilay “tondrozotra” ny Pr RANJEVA Raymond.
Auteur Solo Razafy*Publié le 13 septembre 2012 13 septembre 2012 Catégories Politique
29 pensées sur “Pr RAYMOND RANJEVA : TSY MAHA EFA NY ANDRAIKINY IREO MPITONDRA ANKEHITRINY”
volatiko dit :
13 septembre 2012 à 19 h 14 min
aiza le 60 miliara kay razoki?any antsanonay ka!
13 septembre 2012 à 20 h 18 min
Mamboatra lalana an ! Tandremo sao dia lasa taingenan’ny lalam-by ity lalan-tany ity ê !
Raha be karibônetra koa ny mofomamy tsy azo hoanina !
Hitsikitsika dit :
13 septembre 2012 à 21 h 04 min
Tsy resak ambony latabatra no ahazahoanao ny tetezamita vaovaoa, hita fa olona vendranasy be marenina tsy manaja sonia sy fifanarahana no mitondra, ka izay fanangonatsonia nataonareo ,hisy dikany inona amin´ireo.
tarito ny vahoka manerana ny nosy hitokona an-dalambe » greve generale » na miaraka amin´ny herisetra mihitsy e!
ny vahoka tokony hampiseho hatezerana amin´ny frantsay mitsabaka ny raharaha gasy, ka asiana fihetsika faizina ny teratany frantsay mipetraka any, » tahaka ny nataon´ny tunisie, egypte ireny.
marina fa hamono ny FAt sy ny forongony ary ny miaramilany, marina fa hamatsy fitaovana ny frantsay , fa tsy misy lalana ivoahana izao krizy sy fijaliama-bahoaka izao raha tsy izay,
manakarena ny nosintsika ka tsy hamelan´ny frantsay sy ireo devoly mpivarotra tanindrazana ireo.
13 septembre 2012 à 21 h 06 min
Dia ahoana ny tohiny ? dia ahoana ny paik´adinareo ?????????????
L’urgent n’est pas de trouver ou de nommer un président pour la transition !
Et ce poste de présidence ne se décide pas avec des sondages !
Voromahery dit :
Mba tena tiavo marina re ny Malagasy mpiray tanindrazana.
Tereo manao asa sivika isan-taona daholo ny Malagasy latsaky ny 50 taona anarenana izao mivarilavo izao.
Avy eo manaova antoko politika mahasahana ny Nosy vao miseho mitondra firenena.
Raha hendry ianao ramose Ranjeva dia tohano aloha ny fivrenan’ny filohantsika voafidim-bahoaka.
14 septembre 2012 à 0 h 23 min
Tsy azko ??manao ilay olona mahazo, tsy manao ilay olona mahazo???
masika ratsy kosa ianareo e!!tsy fotoanan’ny fifamelezana intsony izao fa
tokony mba ho tohanana aloha izay mba manao ary izy aza mazoto ny handray ity andraikitra MANKADIRY,
ary olona manana ny hajany izy ka ataoko fa hitana ny teniny fa tsy HILATSAKA, aoka re ray olona mba tsy dia
hankahala fahatany isika fa aleo aloha ho hita ny fandehany vao manankiana a!!MIANGAVY re Tompoko o!!!
tsy mora akoa nie ny nahazo azy e!!!ary izay TSY NANOTA NO AOKA HITORA-BATO.
MANKAHERY anao sy ireo rehetra izay nandray andraikitra niaraka aminy TOMPOKO o!!!MAHEREZA e!!!
dia mba jereo aloha ilay olona miaraka aminy fa io i Ralitera sns fa tsy foza no eo tsssssss
TSY ALEOKO LAVITRA P?RANJEVA TOY IZAY DOMELINA, fatra-pifidy ny manganana koa sendra ny
ngidy tsy telina isika izao, koa aoka mba samy handinika ny tsirairay e!!
14 septembre 2012 à 4 h 26 min
Tsy maintsy manaraka ny sori-dalana Isika fa tsy manao jamba mitsambikina..
Na tiana na tsy tiana dia ny programme voasoritra na tsy voasoratra aza izany dia tsikaritra ao anatin’ny feuille de route ny fisiany !
Ny SADC / TROIKA dia ho avy hanefy ny andraikitra napetraka aminy dia ny » évaluation ,contrôle et suivi de la situation à M.car sur l’ordre public et la sécurité « .
Dia ho tsaraina izany ny filaminana sy ny fandriampahalemana ,dia araka ny valin’izany no handraisan fanahan-kevitra…:
–dia ny fametrahana ny tetezamita vaovao
–ny vodian’ny Filoan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC
— y fisokafana ny fanampiana ara-bola ny Fanjakana Malagasy ho an’ny Fampandroana ny Firenena sy ny fanatsarana aingana ny fari-piainan’ny Malagasy,
–ny fanomanana ny fifidianana izay fotoana handraisan’ ny Malagasy ny fitenena , hafahana mifidy izay lehilahy na vehivavy mendrika ary manana traik’efa hitondra ny Firenena ary hisahana ny fitantanana ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny Firenena !
Aoka ty ny sarety no atao eo anolohan’ny omby !
Ny zinga tsy tokony handingana ny sinibe !
Aoka Isika tsy ho maika tsy fainganaary hahandry tantana !
Marobe ny zavatra azon’ny tsirairay na olopna miarka hatao mba hanampy ny Malagasy hivaotra eo amin’ny fahalalana ny làlana ( compréhension des lois , de leurs applications , de leurs intérêts dans l’harmonisation du fiaraha-monina ), de leurs importance dans , ny varotra ho any ivelany (export) , ny fifandraisana amin’ny Firenen-kafa ( diplomatie )
Les ostes à occuper sont nombreux et éxigent la compétence de chaque candidat et de chaque candidate pour assurer la fonction et la mission qu’implique le poste !
14 septembre 2012 à 6 h 56 min
Inona marina anefa ny tanjon’Ingahy Ranjeva sy ireo olona ireo, ary anisan’izany toa misy an’i Olâlâ ???
Haka ny toeran’Ingahy Ravalomanana, ary satriny io farany io tsy hiverina ao an-tanindrazana intsony ve ?
DISO PAIKA BE IZANY !!
Raha mba misaina kely ilay rangahy, dia mba atao aloha izay hiverenan’ny Filoha, dia avy eo samy mirotsaka izay te-hirotsaka ankaotry ny mpanongana !
Izao tonga dia hita fa mitovy fierehana amin’ny foza, ary efa kobon’ny olona hatry ny ela ny tena tetika, matoa mody namitsaka ! Ny mampalahelo dia hita fa nivoy sy nanamafy an’ilay hoe DIVISER POUR REGNER, IZAY TETIK’ADY NY FRANTSAY !!
Ianao koa ity ranavalona toa lasa sadasada !!
Taniry dit :
14 septembre 2012 à 8 h 40 min
Na inona na inona ny fialan’i TGV no ZAVA-MAIKA , ny fodian’i Dada manaraka ho azy !
Inona no fanafody ? Tsy azo atokisana ny frantsay fa ny hevitra fonosin’izay voalaza ato no izy :
Mihazakazaka be ny fivoharan’ny toe-draharaha. Nilaza Raosy mpandainga fa natahotra ny AV7 de nisintona ny ny fitoriany tatsy Sud Af, hay nivoaka ny didim-pitsaran’ny justce Sud Af t@ Zoma teo, fa tsy mahazo mivoaka ny territoire Raosy, ary nosintonina ny passeport-ny.
De nanao ranomasom-boay ndray nanoratra nitomany tany @ Troika, nanadio tena.
Ny mampe be @ le taratasy, de tsy miandry akory zay avoakan’ny enquête, ary tsy tokony hatahotra raha mihevi-tena ho innocent marina, fa vao maika sahy miantsy ny justice Sud Af ka woe, ho foananay io didy io, ary na de ireo delegasiona mouv Raosy tany farany ireny aza, de NANDAINGA teny Ivato, fa woe, nanao proposition ny hanomezana an-dRaosy passeport Sud Af hono Zuma, fa nolaviny, hay nedala no nangataka naturalisation Sud Af fa réfusé satria maloto eo anatrehan’ny justice Sud Af.
Ny mahatsikaiky @ity taratasy nalefany farany ity, ery ambony ery nedala, de mbola milaza foana woe président, kanefa nialoha ny nandosirany, de nametra-pialana sady nanolotra fahefa t@ miaramila, ary lery mihitsy no tena manitsakitsaka ny FDR, satria tsy voasotra mihitsy ao na de « a » aza, fa lery no filohan’ny transition, de hita mihitsy fa lany lainga Raosy sy ny taranany.
Etsy andaniny, voaasa hiatrika ny fivoriambe NU ny Filoha Rajoelina, ary koa mbola nahazo fanasana manokana t@ireo fikambanana Senateurs noirs Amerikana, alohan’izay handalo aty Eropa, de hita fa matotra ara-politika lay Zandrikely fa dada iny.
Impiry moa ny tenanay, no milaza aminareo Ranjeva sy ry Zanakidada, fa tsy krizy politika no misy any Dago, fa krizy financière, ka raha vao mivaha ny famatsiambola, de afaka io krizy any Dago io, ary mbola sahinay foana no milaza, fa raha tsy Zandry no teo, raha zay tsy fisian’ny famatsiam-bola izay, de ho asa a!
De zay ary le nolazaiko foana woe, hadalanareo ny manohana sovaly efa maty, noho ny tsy fahaizany politika, tsy ampy solaitra,ny ratsy natao teo @ fireneny maraka otran’ny aloka eny foana; mbola tsy misy n’inona2 akory zavatra avoakan’ireny NEGOSY ireny, de ny azy no ataony tonga aloha, ary NY FOMBANY DE MANADIO TENA @ LAINGA, MAMADIKA NY MARINA, ary toa manome fanantenana foana ny mpomba azy, kanefa izy tenanany mihitsy de mahalala fa tsy misy fanantenana intsony ny aminy. De ny toreohevitro anareo, mpandainga loatra rainareo, aza mahatoky azy intsony, fa mijereva olom-baovaovao, ary maninona no tsy tohanana ny olona toa an-dRanjeva itony, ary aza manantena an-dRanjeva hanohana an-dRainareo, fa na Zafy na izy, de nataon’olona lalana hiampiatan fotsiny hahazoana seza rainareo, ary na Ranjeva io aza, ny tetiny raha tsy afaka hilatsaka Raosy, de izy ny ho candidat hitondra ny lokon’ny TIM hifaninana @ ZANDRY, de io woa politika, jerena daholo zay fitaovana haha populaire ny tena hiomanana @ fifidianana, tahaka ny fampiasan-DRASENDRAHASINA SY RAOSY NY FJKM.
De mba misaina woa, fa ny olona de zao ihany ny ao an-dohany, na i Hanitra io, na Ramamy, na Botozaza, na Ranjeva, de woe raha ho FATY ZAHAY MATESA RAOSY SAO ZAHAY HIFINDRAN’NY ARETINAO EO. De mba misaina ry Zanakosy, fa ny cause nareo efa cause perdue, satria ny raianreo mihitsy no tsy mahay politika fa tranon-dainga, ka na ny médiateurs aza tsy mahatoky azy intsony. Ny vola aloha de ananan-dRaosy, fa ny intelligence zéro manatody.
14 septembre 2012 à 8 h 53 min
Mampiela vaovao TSY mahafaly no laTASHY ato zao.
Nanomboka ilay « charles » mantsy no nihetsika indray ireo TiaTanindrazana manodidina ny tena hoe « aiz’izany soratra printy mazav’izan »,
De eo am-piandrasana ny AvantMarquePrêtPartez à Ivato DAHOLO bureaux à déserter
F’ilay fifamonoana any Atsimo no mampisavorovoro raha mbola gasy madio saina tsy nandairan’ny kizarazarao adim-poko (any atsimo angamba no toerana iray tsy mifangaro teny Firantay loatra ny vohabolana!!)
ITONY AVERIKO ETO INDRAY, ao tsara km:
Tompony mangatak’atiny hoy aho isika ! Miandry vao hitsangana daholo ? Miandry ho ripaka ve ny vahoaka ?
Ny fanaratsiana, ny fandotoana na fanosoram-potaka dia mitohy foana !
Tsy misy hetsika tokony atao ve, fa dia raha voafelaka ny takolaka ilany, dia ho tolorana foana ve ny iray ?
Mitaky ny fampiarana ny Lalàna velona, ary miaro ny zon’ny malagasy rehetra ! Izany no tena adidy sy HETSIKA MASINA !
IO FAHATOKISAN-TENA LAVA IO, TSY DIA MAMELY TSINDRAINDRAY !!
Vakio itony, dia fantaro hoe iza no mivarotra ny Tanindrazana !
Izao ve no andrasan-tsika, sa dia hangataka ho Territoire d’Outre-mer ?
Miady irery ny Filoha
Ho an’arivony mantsy ireo hangataka paps satria hoe refizie pôlitika
Hiomehezan’ny rehetra isika ê ! Maro dia maro ireo maneso ny antillais ( Guadeloupe sy martinique ) hoe, miseho ho vazaha kokoa noho ny frantsay fotsy hoditra
Point de non retour io…
Izao no atao hoe 1947 Bis !
« TOHIZO NY TOLONA, FA NY MARINA TSY AN’NY PHAT VELIVELY !! »
O Profesora Ranjeva ô: zavatra expéditif zao.
14 septembre 2012 à 9 h 40 min
Mbola ho voan’ny AVC ry Bogor tropin’ny AV Sept itony ato ho ato !!
Fa mba inona moa no dikan’ity AV7 ity ? Misy 7 angaha ny Anus-Vagin-ndry foza ??
Miala tsiny aho ry namako rehetra !! Hi hi hi ! MDR !!!
Misaotra ry HoAiza, fa efa hoe tolom-piavotana izao â !!
Nieritreritra ohatra iray aho mba ho dinihan-tsika, koa asa izay mba hevitrareo !
Rahatoa moa ka misy mpifanila vodi-rindrina aminareo, izay noraisina toy ny havana mihintsy, niara nizara sy nihinana ny manta ary ny masaka, lasa nisotasota, ohatra hoe nangalatra tany na koa namono ary nahafaty ny iray tao aminareo mihintsy aza !
Dia inona no mba ho ataonareo ?
Tsy hitory, tsy anao inona na inona ve, satria sao dia maha ratsy FIHAVÀNANA izany ? Tohizana ny fifandraisana, ary atao toy ny tsy nisy ve izay zavatra niseho, sa…?
14 septembre 2012 à 10 h 20 min
Tsara be ilay fanontaniana fa tsy haiko raha mifanandrify ilay heritreritra fa
eto mihintsy no mahagaga ahy hoe: maninona no tsy nametraka fitoriana i
DADA @ zavatra rehetra nahazo azy hatr’izay na ny fananany na ny vono olona fahatany ,ireto olona very
asa ny FANASOKETANA maro samihafa,dia izao toa ny fiza indray no MIDINGINA ???gisa lahy homan-ketsa
izy nianjadian’ ny tsy rariny indray no voapanga???
Dia lazaivo sadasada indray bavy rehefa mba miezaka ny mandamina e!!fa hifandrindra lava eto ve rehefa musy
tsy mifanaraka @ hilana azy e!!tsy mandà ny @ fahatongavan’i dada aho fa KOSA ?AHOANA ARY @ FOMBA
INONA ??? ka na iza na iza mikaroka ny hisian’ny filaminana ALOHA sy FITONIANA MANINONA???efa tsy
vitan’ny ankolafy anie ilay izy e!!jereo fa KISONIA tsy misy farany no misy FA MBA AIZA ILAY VOKATRA?????
koa nahoana raha misy mba te handamina no avy dia……..efa fantatra anie fa na IZA na IZA hifanandrina @ DADA
eo TSY HO LANY e!!koa inona no mampikorapaka ???sady aiza koa ity mbola ahatongavana @’izany fifidianana
izany anefa aloha raha mbola izao no RIVOTRA HIAINANA????mba dinio ihany fa isika tsy afaka ny handeha irery,
izay tetika any azy ny azy fa ny FAHAFAHANA hiala @ FANGEJANA mahazo ny firenena no TANJONA aloha, AMIKO!!!
14 septembre 2012 à 10 h 25 min
ho an’i bogor »tsy krizy politika no misy hoy ialahy….de hoe rah tsy lavanify no teo @ izao tsisy famatsiambola izao de asa? hoy ialahy ihany »
ahitsiko ny kozin’ialahy fa foza tsy manamaso RAHA TSY TEO HOE AMBATOVY SY QMM de angamba sahirana hoe eny fa na io lazain’ialahy ho flou io aza de sahy maka 100M $ ho azy sy ny akamany tsy nomena de nidongy ,nanao menace AMBATOVY fa alefa chommage ny mpiasa ,de mody natao @ anaran’ny fanjakana le 75M $ de nomena operate permit 6mois AMBATOVY
Io ry le jamba lahy ireto no atao hoe Remenabila ambony latabatra a
14 septembre 2012 à 10 h 26 min
Ataoko kosa angamba fa mbola tsy misy resaka fifidianana eto fa resaka tetezamita,
ka mandeha ary ve io tetezamita io izao???inona no vokatra azo???filaminana sy
fahatoniana loha no tadiavina alohan’ny zavatra rehetra fa tsy ho vita mora ny raharaha ao anaty SAKOROKA,
sy savorovoro, ka izay mahita lalana aleo aloha ho tazamina???toa ny foza aza toa lanintsika ihany an!!!
14 septembre 2012 à 10 h 49 min
Amin’izao ftoana izao dia maro ireo manano sarotra , mitady tandroka moka sy te hanakatra ny volana homeny ny Malagasy hamalifaliana azy ireo !
Izany no atao hoe mzmpanantena voa tsy hary ,ary ho any olona vory saina dia mpandrebireby ireny…olona ireny
Ny somizo tsy mbola an-tanana ka ny bokitra no vidiana shady..!
Ny tsangan-kevitra tsy misy ,koa ny tsangan’olona no aretirety ! HANAO INONA ?
Aza dia hahodikodina moa ny sain’ny Malagasy , izay mifantoka amin’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY ANTANINDRAZANA !
Misy lahara-pahamehana tsy maintsy arahina …
Ny maika dia maika ankehitriny ho an’ny Malagasy dia ny fodian’ny Filohan’ny Firenena aingana eto ANTANINDRAZANA !
14 septembre 2012 à 11 h 11 min
Ry Bogor foza-AV7 tsy mahafantatra izay dikan’izany hoe pôlitika izany ê ! Ary tsy hiditra ao anatin’ny lohan’izany, satria efa hoe mifangaro ny zavatra rehetra « amin’ny tenany » !
Izao ranavalona, na dia somary misy fitovizany ihany aza ny heritreritra â ! Efa ela ihany no nitafàna teto !
Alohan’ny hanohizako ny resaka aloha, dia mamerina kely aho fa ny Filoha Ravalomanana dia tsy havako, na koa manana karatra TIM ny tenako ; kanefa tohanako izy satria izy no Filoha voafidim-bahoaka farany, ary araky ny hita sy fantatra dia mbola izy no TAKIAN’NY VAHOAKA !! Misy antony io fitakian’ny vahoaka io, na firy na firy ny isany ! Matoa tsy avelan’ny FRANTSAY HIVERINA NY FILOHA DIA FANTATRY RY ZAREO FA MBOLA MAMIM-BAHOAKA ILAY ATAON-DRY ZAREO HOE « SUJET » !!
Eo amin’ny fiainam-pirenena, inona moa no zavatra tena ilaina sy tadiavin’ny rehetra ?
Amiko dia : Ny fandrosoana !
Amiko manoka, dia tsy hisy ny fandrosoana rahatoa ka tsy misy fandriam-pahalemana sy filaminana ! Ireo farany ireo tsy hisy rahatoa ka tsy misy fanajàn-dalàna !!
Efa fantatra hatry ny ela, ary nipoitra izao hoe avy aiza ny KORONTONA ARY IZA IREO ATAO FITAOVANA !!
Mba misy zavatra mivaingana hita ve, nataon’ireo miseho ho mpanao pôlitika sy MPAHAY LALÀNA IREO, na dia mahita sy mihaina koa ao anatin’ny kizo ry zareo ???
Toa zesta sy fitadiavan-toerana lava izao no ataon’ny rehetra, fa tsy miheritreritra ny mahazo ny firenena sy ny mponina. Aza adino fa na ianao, na ny havanao ao anatin’ireo lazaiko hoe mponina ireo !
Tsy manome tsiny an’ireo vahoaka any ambanivohitra sy ireo rehetra tsy dia nahita fianarana aho, fa ireo « PSEUDO-INTELLECTUELS » ireo, no tena fanetriben’ny tany sy ny fanjakàna !!
Rangitra, sorena ary malohiloy ny tenako raha mahita sy mieritreritra ny ataon-dry zareo !
Raha samy manao izay tiany, dia tsy misy raharaha ho vanina mihintsy hoy aho !
Maninona no mitaky ny Fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ny tenako ? Satria NY TSY FANGATAHANA AN’IZANY DIA NAMAN’NY FANOHANANA NY FANONGANAM-PANJAKÀNA !!!
Mitaky ny Fiverenan’ny Filoha ve izao ataon-dry Ranjeva sy ny tariny izao ?? Tsy dia mino loatra ny tenako !!
Ho efa-taona izao no very, ary ny halatra sy ny famonoan’olona mbola tsy nisy tahak’izao !!
Misy priorité daholo ny zavatra rehetra ê !! Izao ny sasany dia efa miomana ho fidiana ; eo koa IREO MIOMANA NY HANAO RECENSEMENT ( IZAY TOA LASA FITADIAVAM-BOLA ) KANEFA NY ATSASAK’ILAY NOSY ( MBOLA TSY DIA MASIAKA AHO RAHA MILAZA HOE NY ATSASANY ) AO ANATIN’NY HOROHORO SY ADY AN-TRANO !!!
Dia mba inona no zavatra azo antenaina amin’izany rehetra izany ??
Tetezamita inona indray ? Tetezamita vaovao ?
Stratégie de positionnement no atao na tadiavin’ireo ! TSY MISY TETEZAMITA IZANY RAHATOA KA TSY MIVERINA NY FILOHA !! IZAY NO NIFANEKENA, DIA TOKONY AMPIARINA !!
Aiza ilay hoe : Consensuelle, neutre et inclusive ???? Manamafy ny RETOUR SANS CONDITIONS VE IZAO ???
14 septembre 2012 à 11 h 20 min
Tsy ahitsiko angamba ilay hoe « amiko manokana », satria manoratra haingana loatra ka misy adino !
Inona no mampikoropaka ?? Mandeha be re ny fotoana ê ! Efa ho efa-taona izao, izany hoe MANDAT IRAY ANY ZAMERIKA !! NY TSY FIHETSEHANA HOY AHO, DIA FANOMEZANA ALALANA HOAN’NY FOZA HANGALATRA BEBE KOKOA !!!
14 septembre 2012 à 11 h 58 min
Tsy olana ilay hoe Ranjeva no hitantana ny tetezamita fa ny olana dia miala amin’ny FDR ilay izy ka ny fanontaniana dia hoe eken’ny SADC sy ny firenena rehetra ve izay sa dia mbola handika làlana indray isika malagasy, matoa anie isika toa izao dia satria nandika lalana isika tsy vitan’ny hoe ny lalam-panorenana malagasy irery no tsipahan’ny mpanongam-panjakana fa ny fifanarahana misy eo amin’ny samy firenena koa ka ny krizy misy eto amintsika izao dia krizin’ny malagasy te hanakarena tampoka sy tsy mahatanty ny fahamarinana ka isika malagasy 20 tapitra no indray mizaka ny vokatry ny krizin-dry zareo ka sarotra ny manasitra io krizy misy eo amin-dry zareo io raha tsy isika malagasy mihitsy no indray mientana manazava ny malagasy rehetra ny tena dikan’ny atao hoe firenena , ny atao hoe olom-pirenena, ary ny adidy sy andraikitra amin’ny maha olom-pirenena fa raha tsy izay dia olon’olom-poana isika.Jereo tsara fa mbola tsy nisy fitondrana be faty olona ohatran’izao fitondrana izao, maty ny any atsimo, maty ny mpangalatra , maty ny miaramila, maty ny olo-tsotra tsy misy afa-tsy vonon’olona no tena malaza e! nefa dia mbola misy sahy milaza fa lafatra izao fitondrana izao , izao no tena izy, dia hoy aho hoe tia tena izay manao izany ary tena tsy mahalala akory ny atao hoe firenena fa ny tannjona sy ny maha maika dia izay FAT manankarena.
14 septembre 2012 à 12 h 56 min
Ny resako anie ry Vonifanja tsy dia hoe, attaque personnelle na gratuite , fa na ianao aza, dia efa NAHITA an’izay mety ho vokatr’ilay tadiavin-dry zareo ê !
Tsy misy Firenena na vondrona hanaiky FDR vaovao izany ! Ny frantsay angaha, rahatoa ka olona mbola anisan’ireo AZAN AN-DRY ZAREO NO HITANTANA !!
Dia hitarazoka eo ny raharaha, dia hanararaotra ny mpanararaotra !
Ny tohin’ny resakao dia manamafy na manam-porofo ny zavatra tsy azo ekena miseho ao an-Tanindrazana !!
Ity izao misy fanontaniana mba tiako apetraka mafy amin’Ingahy Ranjeva !
Repoblika faha firy no hiainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao !! Faha- telo sa faha-efatra ???
Amiko dia faly mihaina ao anaty korontana sy zaoridira ny malagasy ! Tsy mahagaga raha milaza ny gazety fa tsy rotitra akory, lasa mamàny sy mangery eny an-dalàna ny vahoakan’Antaninarivo ! Marina fa tsy mety ary tsy dia mendrika, fa dia miala tsiny amin’ny fihavanana, noho ilay fomba fiteny ! Kiriko sy tohina laotra !
Dignité sy fierté : ZERO MANATODY !!
Toa izany amiko no ataon’ireo miseho ho PRO amin’ny pôlitika ireo !
Tsy misy havan’i dada eto na antoko fa noho ilay fitiavany ny tanindrazana no
mahasarika ahy manoana azy, ary indrindra @’izao fahavoazana tsy azo HIDIVIRANA
mahazo ny firenena izao dia voatery mihintsy hitia olona TOA an’i DADA RAVALO ny VAHOAKA, mazava ho azy!!!satria
mahatsapa ilay fandriampahalemana sy FANDROSOANA tamin’ny fotoan’androny, INDRISSY RY DADA MALALA!!!
Ilay paik’ ady aloha tsy dia azoko loatra fa izaho tsy mpanao politika fa ny ahy ny andrasako dia VOKATRA ka raha
mbola bla bla lava tsy mamely, sao dia mba fialana kosa aza ny azy hoe » EFA MBA FA…. »satria mba mahatsiaro ho
tompon’andraikitra ihany izy eo @ tany sy ny fanjakana ???? ahiahy tsy hiavanana!!!
Samy tompon’andraikitra na izaho, na izy na ianao !
Jereo aloha ny video malaso ao amin’ny tananews ê ! Loza ka loza, noho ireto foza !!
Izao no tadiavin’ny foza koh!!izay no hinanany ! vidina rà latsaka
no nazahoany ilay toerana dia tsy maintsy rà mandra-paharitrany.
14 septembre 2012 à 20 h 42 min
Ny marasily no ilaina fiheverana é
Nitsidika dia naka hevitra tato ny foza ry zareo, dia mba izao hono ê ( Hita tao amin’ny Tananews androany ) !
8.25 Andry Rajoelina » La paix et la sécurité sont garants du développement d’un pays »
Hay va re ry Bogor mba manao tatitra ihany ianareo !!! Lazao aminy fa tsy vitan’ny fanaovana déclarasiô fotsiny ny raharaha, indrindra raha mariônety ny tena !
15 septembre 2012 à 21 h 03 min
Ka ry Bogor anie no mampiasa ani’ Ramenabila, ry zareo ihany no mpamaky trano sy mangalatra dia mody hoe « paix’ jereo tsara mody hihatokely ny vaki-trano sy ny fanendahana dia avy eo ry Ramenabila DJ ho be vava indray, fa ho avadin’ny atidoham-Bongory avy eo. dia vao maika ho betsaka ny vaki-trano amin’ny alalan’ny kalak
f’aiza daholo no hamelomany ireo jiolahy angoniny ireo raha tsy ny
fanomezana fahalalahana azy hamaky trano??na misy aza ny vola @
famarotana ny tanindrazana sy ny harena ao aminy tsy misy mipitika io fa AMPIHIMAMBA daholo dia
dia ny be hatoka no MITAVANDRA ny volabe fa kosa omena fahalalahana hangalatra ny alika ho takalony.
16 septembre 2012 à 13 h 57 min
Loham-bongory sa bogor fotsy v.. ? Hi hi hi !!
Na mainty na fotsy, mety ho tian’ny sasany ao ihany !! Misimisy ihany ry zalahy ao !
Misy roalahy aloha ao dia efa malaza, any ka ilay kala izay toa voan’ny depresiô mihintsy hono !!!
Ny mpanenjika an’ilay remenabila toa hoe 100 000 isan’andro no tsy maintsy omena ny olona iray !
Tangosana toy ny ravim-boatavo sa anan-tsinahy ny vola ê ! Izany no hoe maniry toy ny anana, fa ho an’ny miaramila ihany !
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMITIANA : NY OLONA TSY MAHOMBY AMIN’NY ASANY DIA MIALA
Suivant Article suivant : TSY HAMITAKA ANTSIKA NY FILOHA RAVALOMANANA